टेलिभिजनबाट आउन थाले रियालिटी सो : RajdhaniDaily.com
HomeNot-to-be-missedटेलिभिजनबाट आउन थाले रियालिटी सो
टेलिभिजनबाट आउन थाले रियालिटी सो
काठमाडौं । कोरोना संक्रमणमा कमी भएसँगै विभिन्न टेलिभिजनमा रियालिटी सो सुरु भएको छ । यसै क्रममा निर्देशक निर्माता विशाल भण्डारीका अनुसार हास्यप्रधान रियालिटी सो कमेडी च्याम्पियनको छायांकनसँगै प्रसारण सुरु गरिएको छ । यसको केही साता छायांकन बन्द गरिएको थियो । यो कार्यक्रम दुई साता अघिबाट सुरु गरिएको छ । यसको निर्णायकमा सन्तोष पन्त, प्रदीप भट्टराई, ऋचा शर्मा, मनोज गजुरेललगायत रहेका छन् ।
कोरोना संक्रमण कम भएसँग आफूहरूले सामाजिक दूरी कायम गरेर कमेडी च्याम्पिएको छायांकनसँगै गत साताबाट प्रसारण सुरु गरेको पनि निर्देशक भण्डारीले बताएका छन् । उनका अनुसार यो कार्यक्रम कान्तिपुर टेलिभिजनबाट प्रसारण हुँदै आएको छ । दोस्रो संस्करणको यो कार्यक्रमको २०औं शृंखला यो साता प्रसारण भएको छ ।
यस्तै भ्वाइस अफ नेपालको तेस्रो संस्करणको छायांकन पनि करिब दुई महिनापछि गत साताबाट सुरु भएको छ । यसको छायांनकनसँगै प्रसारण पनि सुरु भएको हिमालय टेलिभिजनका सीईओ श्याम कँडेलले बताएका छन् ।
यो कार्यक्रमको कोच दीप श्रेष्ठ, प्रमोद खरेलसहितको टिमलाई कोरोना संक्रमण भएपछि यो कार्यक्रम केही समयका लागि बन्द भएको थियो । दीपको ठाउँमा राजेश पायल राईलाई कोचमा राखेर यसको छायांकन गत साताबाट सुरु गरिएको हो । हिमालय टेलिभिजनबाट प्रसारण हुँदै आएको यो कार्यक्रम २६औं शृंखला यो साता मात्र प्रसारण भएको छ । अहिले आफूहरूले सामाजिक दूरी कायम गरेर यो कार्यक्रमलाई बनाइरहेको पनि कँडेलले बताएका छन् ।
यस्ता रियालिटी सोको छायांकन गर्दा ठूलो टिम हुने र कोरोना भाइरस एकबाट अर्कोमा सर्ने सम्भावना बढी भएका कारण पनि १६ वैशाखबाट असारको तेस्रो सातासम्म नेपालका सबै टेलिभिजनबाट आउने रियालिटी सोको प्रसारण रोकिएको थियो । असारको तेस्रो साताबाट सबै टेलिभिजनको रियालिटी सोको छायांकनसँगै प्रसारण पनि सुरु गरिएको छ ।
यस्तै नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको ‘दोहोरी रियालिटी सो’ ‘दोहोरी च्याम्पियन’मा पनि गत साताबाट सुरु गरिएको छ । यो कार्यक्रमको उत्कृष्ट १६ समूहको प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ । १२ विजेता समूह र ४ ‘वाइल्ड कार्ड’बाट पुनः प्रवेश गरेका समूहको प्रतिस्पर्धा सुरु भएको हो । योसँगै ‘दोहोरी च्याम्पियन’ भोटिङ राउन्डमा समेत प्रवेश गरेको छ । यसअघि निर्णायकको आधारमा मात्र हुने निर्णय अब दर्शकको हातमा पनि हुनेछ ।
२४ घण्टामा भएका समाचारहरु पढ्नुहोस म्युजिक भिडियोमा देखिँदै साम्राज्ञी (फाेटाेफिचर)
नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुति रहेको ‘दोहोरी च्याम्पियन’मा ‘दोहोरी च्याम्पियन’को निर्णायकका रूपमा लोकदोहोरी गायक प्रजापति पराजुली, लोकदोहोरी गायिका सीता थापा, राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरीगीत प्रतिष्ठानका अध्यक्षसमेत रहेका गीतकार रमेश बिजी र गायक तथा गीतकार चन्द्र शर्मा छन् । यस्तै, लोकदोहोरी गायक बद्री पंगेनी र लोकदोहोरी गायिका प्रिती आले ‘दोहोरी च्याम्पियन’को सञ्चालकको भूमिकामा छन् ।
अब उत्कृष्ट १६ समूहबीचको प्रतिस्पर्धाबाट उत्कृष्ट ८ समूह छनोट गरिनेछ । दर्शकको भोटिङलाई ५० प्रतिशत र निर्णायकको ५० प्रतिशत आधारमा प्रतियोगीती उत्कृष्ट ८ मा प्रवेश गर्ने शर्माले बताए । उत्कृष्ट ८ बाट ४ हुँदै प्रतियोगिता फाइनलमा प्रवेश गर्नेछ ।
फिजिकल र अडिसन राउन्डबाट छनोट भएका ३५ समूहबाट उत्कृष्ट २४ हुँदै उत्कृष्ट १२ समूह छनोट गरिएको थियो । भोटिङ राउन्डमा प्रवेश गर्नुअगाडि एक निर्णायकले एक–एक समूहलाई ‘वाइल्ड कार्ड’मार्फत पुनः प्रवेश गराउन पाउने व्यवस्था थियो । सोहीअनुसार ‘वाइल्ड कार्ड’मार्फत निर्णायकले १–१ समूह छनोट गरेर पुनः प्रवेश गराएको निर्णायकमध्येका एक चन्द्र शर्माले जानकारी दिए ।
‘दोहोरी च्याम्पियन’लाई लोकदोहोरी क्षेत्रकै ठूलो दोहोरी रियालिटी सो भनिएको छ । यसमा प्रथम हुने समूहलाई नगद २० लाख, दोस्रो हुने समूहलाई नगद १५ लाख र तृतीय हुने समूहलाई नगद १० लाख रुपैयाँ पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ । प्रतियोगीता हरेक शनिबार बेलुका ८ः५० बाट नेपाल टेलिभिजनमा प्रसारण हुँदै आएको छ ।
काठमाडौं । नारायणहिटी दरबार संङ्ग्रहालयमा राखिएको श्रीपेज निकाल्न खोज्ने एकजनालाई नेपाली सेनाले नियन्त्रणमा लिएको छ । सुरक्षामा खटिएका नेपाली सेनाले उनलाई पक्राउ गरेको हो। नारायणहिटी...
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभामा यसै साता विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । संवैधानिक प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ३०...
लोकप्रियता नै सरकारको चुनौती
नेपालका वामपन्थी सरकार छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलनका माध्यमबाट सामन्तवादको उच्छेद गरी क्रान्ति सम्पन्नपश्चात निर्वाचनबाट यो सरकार स्थापना भएको हो । लोकप्रिय मतद्वारा स्थापना भएकाले...
मण्डपबाटै बेहुलासहित पाँच जना पक्राउ
जिउँदै व्यक्तिलाई ‘मृत्यु ’को बिल्ला : चिप्लिए की चिप्लाइयो ?
कोरोनाबाट थप एकको मृत्यु, मृत्यु हुनेको संख्या ४० पुग्यो
नेपाल रत्न स्व. कृष्णप्रसाद भट्टराइलाई
२४ घण्टामा भएका समाचारहरु पढ्नुहोस विवादमा संगीत रोयल्टी संकलन समाजको नयाँ कार्यसमिति